Taliska Ciidanka xoogga dalka oo soo bandhigay Xubin ka tirsan Al-Shabaab | Radio Balcad
Home WARARKA MAANTA Taliska Ciidanka xoogga dalka oo soo bandhigay Xubin ka tirsan Al-Shabaab
Taliska Ciidanka xoogga dalka oo soo bandhigay Xubin ka tirsan Al-Shabaab
Taliska Qeybta 60aad ee Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa Maanta Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay kusoo bandhigey mid ka midd ah davaalamayaasha Al-Shabaab oo ay Gacanta kusoo dhigeen Ciidanka .
Daa’uud Cabdirashiid Xuseen oo Magaciisa Afgarashada uu yahay( Abdi kaafi ) oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa gacanta kusoodhigey Ciidanka Ururka 47-aad guutada 8aad ee Qeybta 60aad Xoogga dalka Soomaaliyeed, kadib howlgallo ay ka wadeen Ciidanka tuulooyinka hoos yimaada Deeganka Deynuuney ee Goboka Baay .
Saraakiisha Ciidamada qeybta 60aad ayaa waxaa ay sheegeen in Cabdikaafi uu Al-Shabaab ku jirey mudso laba sano ah una qaabilsanaa Amniyaadka, Sahanka iyo soo qabashada ka shaqeeya . isagoona ka qeyb qaatey Dagaalo dhowr ah oo ka dhacay deeganada Gobolka Mudug halkaasi oo Al-Shabaab uga biirey Markii hore.
Previous articleGuddoomiye Cusub oo loo doortay Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka
Wasiirka Gaadiidka dalka Uganda oo ka badbaaday Isku-day Dil
Mahad Salad oo la gudoonsiiyay shahaadada Musharaxnimada ee kursiga #HOPe-147